Ungayifumana njani ukuba imveliso yakho ifikile kwi-imeyile entsha? | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Ungafumanisa njani ukuba imveliso yakho ifikile kwi-imeyile entsha?
Ngokwazi kwam, isaziso kufuneka sifike kwifowuni ephathekayo. I-SMS ngamanye amagama. Ubuncinci, oku kwenzeka rhoqo xa sifumana imveliso / ipasile. Iya kubonisa inani lesibhengezo onokuthi ufumane ngazo iimpahla
Ngaphambi kokuthumela iimpahla, kufanele ukuba waziswe ukuba ungayisebenzisa i-Intanethi ukulandela umkhondo wendlela yepasela yakho oya kuyo. Ibhakhowudi efanayo sisiqinisekiso sokuba uyakuyifumana iphakheji yakho. Ukuba awuyazi ikhowudi, imveliso iya kuba yingxaki ukuyithatha eposini.
Nje ukuba ndifumane iphakheji nge-quot; imequot entsha; ... Ewe, iphakheji ifika ngokukhawuleza kunokuba idlule kwi-Ukrposhta ...
Ndifumene isaziso ngohlobo lweSMS kwifowuni yam kwaye kwi-nm ibhakhowudi yepasile (inombolo yokubhengeza) ibonakalisiwe. Kwiwebhusayithi esemthethweni quot; usebenzisa ibhakhowudi (inombolo yokubhengeza), unokujonga le nxalenye (imveliso). Kwaye ukuze ufumane ngokukhawuleza, kufuneka uyazi ibhakhowudi (inombolo yokubhengeza).
Ukuba ulindele ipasile ekufuneka ifike ngePosi entsha, ke kuya kufuneka unikele ingqalelo kwi-SMS eza kwifowuni yakho. Ngokwesiqhelo bathumela i-SMS malunga nokufika kwepasile yakho kwifowuni ebonisa ikhowudi yephaseji yakho. Kukho iimeko zokuba i-sms ifike kade, kwaye iphakheji sele iseposini. Kule meko, unokulandela umkhondo ngenombolo kule ndawo. .
Umbuzo ozenzekelayo ovela kwiakhawunti yakho yobuqu, unokufumanisa ukuba iimpahla zifikile okanye cha.
Imeyile entsha yenye yezona ndawo zithandwayo zokuhambisa iipasile kunye neempahla. Ungafumanisa ukuba iimpahla zifike eposini kwiwebhusayithi yeMeyile eNtsha ngenombolo ye-invoice obefanele ukuba uyifumene kumthengisi okanye emzimbeni. umthumeli. Ngenisa ikhowudi kwibhokisi ekweli phepha kwaye ucofe ukukhangela (phezulu ngasekhohlo). Kwaye unokulinda nje isiqingatha semini kwaye uyakufumana umyalezo weSMS kwifowuni yakho apho inombolo ye-invoice iya kuboniswa kunye nesimemo sokuza kulanda ipasile.
Ukuqala, iinkonzo quot; INewququot entsha; ixabiso elincinci. Kodwa ukuba uye wathumela ipasela ngeposi entsha, kuya kuthi emva koko kuthunyelwe isaziso ngeSMS nenombolo yebhakhowudi kwinombolo yefowuni ebonisiweyo xa uthumela. Kwaye nefom yokwazisa iya kufumaneka kwirisithi yepasile. Kwakhona, iphasela ngenombolo yengoma inokulandelelwa kule ndawo.
Yiya kwiwebhusayithi yeRussia Post kwaye uqhube idatha yepasele lakho kwiikholamu ezikhethekileyo eziya kukubonisa. Njengomthetho, apho kufuneka ufake ibhakhowudi yephakheji. Ndiyabulela kubuchwephesha bale mihla, unokufumana ngokulula indawo apho ikhoyo iphakheji yakho.
I-mailquot entsha; yazisa umamkeli ukuba iphakheji yakhe sele ikhona eofisini okanye kwindawo yokugcina izinto. Ngokuchanekileyo-iingxelo ngeSMS. Kwiwebhusayithi yale nkampani inkulu yezothutho, inkonzo yokulandela umkhondo wezithuthi iyafumaneka ngenombolo yokubhengeza. Umthumeli kufuneka akuxelele le nombolo akugqiba ukuthunyelwa.
Guys, kodwa umbuzo kukufumanisa ngaphandle kwenombolo ye-invoice njengoko inokwenzeka kwi-akhawunti entsha yeMeyile
Imeyile entsha ithumela iSMS ngesaziso sokuba iimpahla zifikile.
Unokulandela umkhondo wempahla kwiwebhusayithi ngenombolo yetyala lokulayishwa.
Inkampani quot; I-Postquot entsha; ithumela izaziso zeSMS zokufika kweempahla.
Umyalezo weSMS unenombolo yokubhengeza, inombolo yokugcina izinto iimpahla ezifike ngayo, ezifika kuyo iimpahla.
Kuyinyani, lo myalezo ngamanye amaxesha ufika emva kwexesha, unokufunyanwa emva kokuba sele uyithathile iphakheji. Ke ukuba ufuna ngokukhawuleza ukubiza umnxeba.
Kwaye zingaphi iintsuku emva kokufika, iimpahla ezinokuma?
Xa iphakheji ifika ukusuka eKiev ukuya eZaporozhye kufanele ibe nge-11.01.17/XNUMX/XNUMX ixesha elingakanani
Iposi entsha ayisoloko ithumela imiyalezo ye-SMS malunga nokufunyanwa kwezinto. Ke ngoko, eyona ndlela inokuthenjwa yokulandelela ukufunyanwa kweempahla kwindawo enqwenelekayo yogcino lweMeyile entsha Sebenzisa ifom Khangela ipasile okanye umthwalo. Faka inombolo ye-invoice kule fomu. Iifom ezinjalo ziyafumaneka kwiwebhusayithi esemthethweni nakwezinye iisayithi ezikwi-Intanethi. Kodwa iwebhusayithi esemthethweni yePosi eNtsha ngamanye amaxesha igcwele kakhulu kunye ne-buggy. Ke ngoko ndisebenzisa ukukhangela kwenye indawo.
Xa ufumene inombolo ye-invoice kumthengisi, ngaba ikho intembelo yokuba umthengisi uzithumile iimpahla?